(101) – Judging the Picture ဓါတ်ပုံ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ မှတ်စု ( ၁၀၁ )
“ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ကိုအကဲ ဖြတ်ခြင်း “
သာမန် အားဖြင့် ကျွန်တော်ဟာ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ကို ကောင်း၏ မကောင်း ၏ စတဲ့ ကောက်ချက် ချ ခြင်း များ လုပ်လေ့ မရှိပါ။ လုပ် ရန် အလွန် ၀န်လေးပါတယ်။
အကြောင်း မှာ ကိုယ် တိုင် ကိုယ် က ဓါတ်ပုံ ရိုက်တဲ့ ၊ ၀ါ ၊ သဘာ ဘာမှ သိတ် မရှိ သေးတဲ့ အပြင် ပုံ တစ်ပုံ ရဲ့ ကောင်းတယ် မကောင်း တယ် ဆိုတာကို ကိုယ့် အကြိုက် နဲ့ သာ ကိုယ် ကြည့် တတ် တဲ့ သူ ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
နောက်တစ် ချက် က ဓါတ်ပုံ ဆိုတာ အနပညာ ဖန်တည်း မှု တစ်ရပ်မို့ ကြည့်သူ ရဲ့ ခံစားမှု နဲ့ လည်း သက်ဆိုင် နေလို့ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာ အမြင် တစ်ရပ်ပေါ်မှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ခံစားမှု များကွဲလွဲ နိုင်ပါ တယ်။
အခု ရေးမဲ့ မှတ်စု ရဲ့ အခြေခံ က တော့ Face BooK ပေါ်မှာ S D Johar ရဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ နဲ့ ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ် ခြင်းဆိုင်ရာ အချက် များ ကို မြန်မာ လို အချုပ် သဘော ဘာသာပြန် ထားတဲ့ ပုံ ကို တင်ထားတာ တွေ့ တာနဲ့ ကူးယူ လေ့ လာ ကာ ကိုယ် လေ့ လာ မိသလောက် ပြန်ရေးချ လိုက်ခြင်း သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ လို ဓါတ်ပုံ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေး ပုံစံ ကို ကျွန်တော် ကို တစ်ခါ မှ လည်း မတွေ့ ဘူးပါ။ ဒီတစ်ခု ကိုသာ ပထမ ဦးဆုံး တွေ့ ဘူးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ရေးမဲ့ S D Johar ရဲ့ ဓါတ်ပုံ အကဲဖြတ်ခြင်း Post ကို Face Book ပေါ် တင်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့ မန္တလေး က ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေ ကိုစိုးလှိုင် ( Nice ) ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုစိုးလှိုင် က -
“ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဝါသနာရှင် များ ၊ မသိကြသေး တဲ့သူများ အားလုံးကို ပြိုင်ပွဲ အမှတ်ပေးပုံ ကို စနစ်တကျ သိစေချင်လို တဲ့ အတွက် နဲ့ ဒိုင်လုပ်တဲ့ အခါမှာလဲ လိုအပ်မယ်လို့ ထင် တဲ့ အတွက် ဒီ Post ကို တင်ပေးခြင်းဖြစ် ကြောင်း ” ….. သူ့ Post မှာဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။
မန္တလေး က ကိုစိုးလှိုင် တင်တဲ့ Post ကို စင်ကာပူ က စိုးလှိုင် က အတန်ငယ် ဖြန့် ကျက် လေ့ လာ ကာ သူ သဘော ပေါက် နား လည် သလောက်ပြန် ရေးတဲ့ မှတ်စု ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုစိုးလှိုင် Post ကိုတွေ့ ကာစ က သာမန် ကူးထား တာ လောက်ပါဘဲ။
နောက် ပြန် လေ့ လာရင်း နဲ့ ဒီ အကြောင်း လေး ကို နားလယ်သလောက် ချဲ့ပြီး မှတ်စု လေး လုပ်ထားရင် ကောင်းမယ် လို့ စိတ်ကူးရ လာရာက ဒီ မှတ်စုလေး ဖြစ်လာ တာပါ။
SD Johar ရဲ့ အမှတ်ပေး အချက် တွေ ကို ကျယ်ချဲ့ ရေး ဘို့ အတွက် ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး များစွာ ကို ရှာဖွေ ဖတ်ကြည့်ရာ မှာ တူ တဲ့ အကဲ ဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာအခြေခံ အချက် များ တွေ့ ရသလို SD Johar အကဲဖြတ် မှတ်တမ်း တွင် မပါ သေး တဲ့ မြောက်များစွာသော အချက် များကိုလည်း တွေ့ လာရပါတယ်။
အကုန်လုံးကို စုပေါင်းကာ လိုက် ရေး ပြန်လျှင် လည်း ကျန်းတစ်စောင် ပေ တစ်ဖွဲ့  လောက် ဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရှင်းလင်း ဆုံး ဖြစ်တဲ့ မန္တလေး ကိုစိုးလှိုင် ရဲ့ SD Johar အကဲဖြတ် ပုံစံ ကို သာ နား လည် သလောက် ရှင်းလင်း ရေးသားပါမယ်။
SD Johar အကဲဖြတ် မှတ်တမ်း တွင် မပါ သည့်ဓါတ်ပုံအကဲဖြတ် ခြင်း ဆိုင်ရာ အချက် များ ကို မူ ဤ မှတ် စုရဲ့ အဆုံး ပိုင်းတွင် အချုပ် သဘော ရေး ထားပါတယ်။
နမူနာ ပုံများ ကို သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ် အလိုက် ရှာဖွေကာ ကျွန်တော် ဥာဏ်မှီ သလော က် တတ်နိုင် သမျှ ပူးတွဲ ဖေါ်ပြ သွားပါမယ်။
အတွေ့အကြုံအရ ရေး ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကျွတ်တော် ဥာဏ် မှီ သလောက် လေ့ လာ ဖတ်ရှုကာ ဘာသာပြန် တဲ့ မှတ်စု ဖြစ်တဲ့ အတွက် အတွေ့ အကြုံ ရှိတဲ့ ပညာ တစ်ဦး ရေး သလိုပြည့် စုံ နိုင် မည် မဟုတ် မှာ သေခြာပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်း စဉ် အလိုက် တွဲပြ ထားတဲ့ နမူနာ ပုံ များ ဖေါ်ပြ ရာမှာ လည်း ခေါင်းစဉ် နဲ့ ကိုက်ညီမယ် ထင်တဲ့ ပုံ များကို ရနိုင်တဲ့ နေရာ များစွာက ပူးတွဲ တင်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ များအနက်သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်း စဉ် နဲ့ အတိမ်း အစောင်း ရှိတဲ့ ပုံများ လည်း ပါသွား နိုင် ပါတယ်။
ဤကဲ့ သို့ ကွဲလွဲ ချက် များ တွေ့ပါက ပညာ ရှင်များ အနေနဲ့ ပြင် ဆင် ဖြည့် စွက် ဖတ် ရှု ပေးဘို့ ပန်ကြား လိုပါတယ်။
ယခု ဖေါ်ပြထားတဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်း ဟာ S D Johar ရဲ့ ရေးသား ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံသေ လို့ ယူဆ လို့ မရပါ။ အထက်တွင် ပြော ခဲ့ သလို သူ့ ရဲ့ အကဲဖြတ် မှတ်တမ်း တွင် မပါသည့် အကဲဖြတ် ခြင်း ဆိုင်ရာ အချက် မြောက် များစွာ ရှိပါတယ်။
နေရာ ဒေသ အမျိုး မျိုး ရှိ ဓါတ်ပုံ ကို အကဲ ဖြတ် အမှတ်ပေးတဲ့ သူများ အနေနဲ့ သူ တို့ ကို လမ်းကြောင်းပေးတဲ့ Guide Line Criteria တွေဟာလည်း မူကွဲ များ စွာရှိနိုင်ပါမယ်။
သို့ ရာ တွင် မည်သို့ မူကွဲ စည်း မျဉ်း တွေ ဖြစ်စေကာမူ ယခု ဖေါ်ပြ အချက် တွေ ထည်း က အခြေ ခံ အချက်တွေ နဲ့ တော့ တူကြမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုရပါမယ်။
“ S D Johar ရဲ့ ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ် ပုံစံ “
1. Print Quality ( 30-Mark )
ဓါတ်ပုံ ဆေးသား ကောင်းမွန်မှု ၊ ကြည် လင်ပြတ်သားမှု။
အခြား ပြိုင်ပွဲ တွေ မျာ တော့ အမှတ် ဘယ်လောက် ပေးတယ် မသိ Johar ကတော့ ဒီ အချက် ကို အမှတ် (၃၀) ပေးထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
· ဤ အမှတ်ပေး ခေါင်းစဉ် အောက် တွင် ဓါတ်ပုံ ကြည်လင် ပြတ်သား မှု ဆိုတာ အများခေါ် နေကြ သည့်- ကြည် ၊ တောက် ၊ ရှင်း လို့ ဆိုရပါမယ် - ။ အောက် ပါအချက် တွေ ဖြစ်ပါမယ်-
· Focus ပြတ်သား မှု။
· Noise ကင်းစင် ခြင်း၊
· အရောင်များ ရော ထွေးနေခြင်း မရှိဘဲ။ Color compliment များရှိခြင်း များ ရှိ ရ မယ် လို့ ဆိုရပါမယ်။
နမူနာ ပုံ များ။
အထက်မှာ ဖ်ါပြခဲ့ သလို နမူနာပုံများကိုသက်ဆိုင်ရာ အမှတ်ပေး ခါင်းစဉ် အလိုက်နေရာ အသီးသီး မှ ရှာကာ ခေါင်းစဉ် များနဲ့ ကိုက်ညီမယ် လို့ ယူဆ တဲ့ ပုံများကို အမှတ်ပေး ခေါင်း စဉ်များရဲ့ နမူနာ ပုံများအဖြစ် တွဲပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Technical ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံများ ကို နမုနာ ပြရာ တွင် ကွဲလွဲ မှု မရှိနိုင်စေကာမူ Artistic ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပုံ များ ပြ ရာ တွင်မူ ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ ကွက်တိကျ ခြင်မှ ကျ နိုင်ပါမယ်။
ခေါင်းစဉ် များနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိတဲ့ ပုံ များ အကြား တွင် ခေါင်းစဉ် နဲ့ သွေဖည် တဲ့ ပုံများ လည်း ပါသွားတာ များ တွေ့ ပါက ပညာရှင်များ အနေနဲ့ ဖယ်ပြီးကြည့် ပေးကြ ပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။
2. Emotional Appeal ( 15-Mark )
(မျက်စေ့ အာရုံ ဆွဲဆောင်မှု )
ပုံတစ်ပုံ ကို ဖြတ်ကနဲ မြင် လိုက် ရုံ မျှ နဲ့ မျက်စေ့ လွှဲ မသွားနို င် ဘဲ ပြန်ကြည့်ရတဲ့ စွဲဆော င် မှု မျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကောင်းတာ မကောင်းတာ နောက်မှထား ရုတ်တရက် မြင်ရုံနဲ့ ရှေ့ ပုံတွေ ကို ဆက် မကြည့် နိုင်ဘဲ ဒီပုံမှာ တင် ရပ် ပြီး ကြည့်နေရတဲ့ ပုံမျိုး ပါ။
ဒီလို ပုံ မှာ မီတာပေါင်း များစွာက ကြည့် လိုက်တာ နဲ့ ထင်းကနဲ မျက်စေ့ထဲ ၀င် နေ လောက်တဲ့ Structure ရှိနေ တဲ့ ပုံ ဖြစ်ရပါမယ်။
ဒါဟာအရေး အကြီးဆုံး ကနဦး ဖမ်းစား မှုပါ။ ပုံ ဟာ Strong Composition Order ရှိနေတဲ့ ပုံ မျိုး ပါ။ ဒီလို Strong Composition Order မရှိပါက မည်သို့ သော Detail တွေ ထည့် ပြ ထားစေကာမူ Story မရှိသော ပုံ ဖြစ်နေပါ လိမ့် မယ်။
Strong Structure ဆိုတာ ဟာ ပုံ တစ်ပုံ ကို လိုခြင်တဲ့ ပုံ ဖြစ်လာအောင် ဖေါ်ဆောင် ပေးတဲ့ Shape, Light Contrast, Color Contrast စသည် တို့ပါဘဲ လို့ ဓါတ်ပုံ ဆောင်းပါးရှင် Ken Rockwell ရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခု မှာ ဖတ်ဘူးပါတယ်။
အောက် က ပုံ မှာ အထက် က ပြော ခဲ့သော အကြောင်းအချက် တို့ ရဲ့  နမူနာပုံဖြစ် ပါတယ်။
" Ruin "
အထက်ပါ ပုံ နဲ့ ပတ်သက် လို့ Ken Rockwell က အောက် ပါအတိုင်း ရှင်းပြ ပါတယ် -
“ ပုံ ရဲ့ ခေါင်းစဉ် က “ Ruin “ ပါ။ ဒီပုံဟာ အရောင်၊ ပုံစံအလင်း အမှောင် တို့ ကို သာသာကဲကဲ ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသည့် Strong Structure ပုံ တစ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံကို အလယ် တွင် အနီရောင်အချွန်း ကိုထားပြီး ဘေး မှ အပြာ ရောင် မီး ခိုးရောင် များဖြင့် ရံ ထား ပါတယ်။
အနီရောင်မှာ Subject ၏ ပင်မ အရောင် ( Positive Space) ဖြစ်ပြီး အပြာ နှင့် မီးခိုးရောင်တို့ မှာ ရံ ထားသည့် (Negative Space ) အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။
အပြာ နှင့် မီးခိုး ရောင်များ အကြားတွင် ထည့် ထားသည့် အနီရောင် သည် ကြည့်သူ၏ မျက်စေ့ အတွင်းသို့ ခုန် ကာ ၀င်လာလိမ့် မယ်။
ဤ ပုံ ကို Ultra-Wide angle Lens ဖြင့် ရိုက်ထားပါတယ်။
Ultra-Wide angle Lens ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် အတွက် ပုံ၏ ထောင့်နေရာ များ တွင် အနည်းငယ် မှောင် နေပါတယ်။ ဒါကို Falloff ဟု ခေါ်ပါတယ်။
ဒီ Falloff ဟာ အလယ် ပိုင်းရှိလင်းနေသည့် နေရာ ကို အာရုံ ရောက်အောင် ပို့ ပေးပါတယ်။
ဒီလို အလယ် အထူးပြု သောအနီရောင် ( Central emphasis Red) ပုံ မှာ တစ်မိုင် ခန့် အကွာ မှ ကြည့်သူ၏ အာရုံ ကိုပင် ဆွဲယူ နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
အထက်မှာ ဖေါ်ပြသကဲ့သို့ ပုံ ကို ကြိုက်သည်မကြိုက်သည် အပထား ၊ ပုံရှေ့ ကဖြတ်သွား စဉ် ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက် မိ တာ နဲ့ ပင် နောက်ပြန်လှည့်ကာ ကြည့် ရ သည့် ပုံ မျိုး၏ နမူနာ ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ ကောင်း တစ်ပုံ ကိုဖွဲ့ စည်း ရာ မှာ ဒီလို Strong Structure ရှိရန်မှာ အဓိက အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြည့် သူ၏ အာရုံ ကို ကနဦး ဖမ်းပြီး မှ ကျန်သည့် Detailed Story ကို ဆက်ခံစား စေရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ နမူနာပုံ တွင် ပါ တဲ့ Less Details များမှာ အနီရောင်၏ အနောက် မှ ထိုးထွက်နေသည့် အ၀ါရောင်၊ ပုံ၏ အလယ်တွင် ထိုးထွက်နေတဲ့ တိမ်တိုက် ၊ ကြမ်းပြ င်ပေါ် ရှိ ဆီကွက် များ အနီရောင် နံရံ များပေါ် တွင် စီးကျနေသည့် မိုးရေ စီးကြောင်းများ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
ဒီပုံရဲ့ အဓိက ဖွဲ့ စည်း မှု မှာ Shape, Colour and Balances တို့ ဖြစ်သည်။ စင်စစ် အားဖြင့် ဒီပုံ ဟာ အမိုးပင် မရှိသည့် စွန့် ပစ်ထားသော ပစ္စည်း သိုလ်လှောင် ရုံ အဟောင်း ကို ရိုက် ထားတဲ့ ပုံ ပါ။
ဒါကြောင့် ခေါင်းစဉ် ကိုလည်း “ Ruin “ လို့ ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ဆု များစွာ ရထားတဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော နမူ နာပုံများ။
3 - Originality (15 Mark )
မိမိ ကိုယ် ပိုင် အမြင် နဲ့ ရိုက်တဲ့ ပုံ ၊ သာမန် မြင်ဘူး နေတဲ့ ပုံ မျိုး မဟုတ် ။
မိမိ ကိုယ် ပိုင် စိတ်ကူး အမြင်နဲ့ ရိုက် တဲ့ Originality ပုံ မျိုး ဟု ဆိုတာ ပြော တော့ သာ လွယ်ပေမဲ့ ၊ အခြားအခြားသော ပုံတွေ ရဲ့ အမြင် လွှမ်းမိုးမှု နဲ့ ကင်း တဲ့ပုံ ဆို တာ အတော်မလွယ် တဲ့ ကိစ္စပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လို့ တောင်အာဖရိက က နံမည်ကြီး Wildlife and Nature Photographer ဖြစ်သူ Mark Dumbleton ပြောတာ လေး ကို ပြန် ပြော လိုပါတယ်။
အောက် တွင် “ကျွန်တော် “ ဟူသော အသုံးအနှုံး ဟာ Mark Dumbleton ကို ကိုယ်စားပြုပါ တယ်။
Mark Dumbleton က - “ ….. Originality in Photography ဆိုတာ ပြောတော့ သာ လွယ်တယ် လူတိုင်း နီး ပါး လောက် လက်ထဲ မှာ ကင်မရာ ရှိနေတဲ့ လက်ရှိ ခေတ် ကြီးမှာ ဘယ်သူ့ ပုံ နဲ့ မှ မတူ တဲ့ Unique images ရိုက် ဘို့ ဆိုတာ အတော့ ကို မလွယ် တဲ့ ကိစ္စပါ။
အခု ခေတ် မှာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တဲ့ စိတ်ကူးတွေ ဟာ အခြားသော ပုံတွေ နဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း တစ်နေရာ မဟုတ် တစ်နေရာ မှာ ညိ နေတတ် ကြပါတယ်။
အချို့ ဆိုရင်လည်းသူ မျက်စေ့ ကျတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဆရာ ရဲ့ ခြေ ရာ အတိုင်း လိုက်နင်း တတ်ကြတယ်။
Unique images ရိုက်ဘို့ ခက်တယ် ဆိုပေမဲ့မြင်ရိုး မြင်စဉ် ရိုက်ရိုး ရိုက်စဉ် တွေ တဲ ကနေ ဖေါက်ထွက် နိုင်ဘို့ လိုပါတယ်။ အားလုံး သော လွှမ်းမိုးမှု တွေ မှာ လုံး ၀ ကင်းနေခြင်း မရှိစေကာမူ ကိုယ့် ပုံစံ တစ် ခု ရအောင် ဖန်တည်း ဘို့ လိုပါတယ်။
Photographic Community မှာ များသော အားဖြင့် ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ …” ဒီပုံ ကို ဘယ်မှာ ရိုက်တာ လဲ၊ ဘယ်လို ရိုက်တာလဲ …” ဆိုပြီး ပုံတူ လိုက်ရိုက်တဲ့ ဘောင် ထဲ က ခွဲ ထွက် ဘို့ လိုပါ မယ်။
Own unique artistic vision ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့် အနုပညာ အမြင် ကို ထုတ်ပြ နိုင်ရပါမယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အခြားသော ပုံများ ကို လေ့လာကာ own unique artistic vision ဖြစ်လာအောင် ရိုက်တယ် ဆိုစေကာမူ Completely Unique ဖြစ်တယ် လို့ မြေ ပာ နိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်တော် ဟာ ထို ထို သောလွှမ်းမိုးမှု များအောက်မှာ ဖေါက်ထွက်ဘို့ နေ့ စဉ် ကျိုးပမ်းနေသည်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် လည်း ကျိုးပမ်း ဆဲ သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mark Dumbleton က အထက်ပါ မြင်းကျား ပေါ် ငှက် ကလေး နားနေတဲ့ ပုံ ကို နမူနာ ပြထားစေကာ မူ အဆိုပါ ကျွဲ ၊ နွား ကဲ့သို့ တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ကောင် ပေါ် ငှက် နားတေဲ့ ပုံ မျိုး များစွာရှိပါတယ်။ အောက်က တိရိစ္ဆာန် နဲ့ အပေါ်က ငှက်သာ ကွဲ ပါမယ်။
Influence ကင်းပြီး Completely Unique ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ထင်သလောက် မလွယ်ကြောင်းပြ ပုံ ရပါတယ်။
အောက်ပါ နမူနာ မူ ကွဲ ပုံ များကို ကြည့်က Completely Unique ဖြစ်ရန် မလွယ် ကြောင်း သိသာ နိုင်ပါတယ်။
4 – Unity - ( 10 – Mark )
ကြည့် သူ အာရုံ မပြန့်စေဘဲ မိမိပြ လိုသော အရာ ကို အာရုဏ် သက်ရောက် စေရန်အ တွက် ဘေး အဖွဲ့ များက ရံ ကာ အားဖြည့် ပံ့ပိုး ပေးတားသော ပုံ များ။
Lines and Colors များက မိမိ ပြ လို တဲ့ Subject ကို Center of Interest အဖြစ် ထိထိ ရောက်ရောက် ဖြစ်လာ စေဘို့ ပံ့ ပိုး ပေး ခြင်း လို့ ဆိုရပါမယ်။
5 - Vitality (10 Marks )
သဘာဝ ကျစွာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု ရှိခြင်း၊
ပုံ များရဲ့ သဘာဝ ဟာ လှုပ်ရှား သက်ဝင် နေတဲ့ Dynamic အသွင်အပြင် ရှိနေ တာကို ဆိုလို တာပါ။
များသောအားဖြင့် Vitality ကိုရိုက်ရာ မှာ သာမန် မြင်နေကြ မိသားစု ၊ သူငယ်ခြင်း မိတ်ဆွေ များ ပျော်ရွှင် နေကြ တဲ့ သဘာဝ ၊ ဘွဲ့ယူ အပြီး ဦးထုတ် မြှောက်တ င် ကြတာမျိုး ၊ လေထဲ ခုန် နေတာမျိုး ကိုသာ ဆိုလို တာ မဟုတ် ပါ။
Vitality Photography ကို ဘယ်လိုပုံမျိုး လို့ ပုံသေ သတ်မှတ် လို့ မရပါ။ Vitality Photography ဆိုတာ လူကို လိုက်လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆိုချက် အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တယ် “ Vitality isalabel that will have different meanings to different people. “ ဖြစ်တယ်လို့ Vitality Forum တစ်ခု မှာ ဓါတ်ပုံ ဆရာ Spanky ပြော တာ တွေ့ ဘူးပါတယ်။
သူပြော တာ ကို ကျွန်တော် ထောက် ခံ ပါတယ်။ အနုပညာ တစ်ရပ် ကို ဘောင်ခတ် လို့မရနိုင်ပါ။ တစ်ဦး တစ်ယောက် အတွက် ကောင်းပေမဲ့ အခြား သူ တစ်ဦး အတွက် ကောင်း ခြင် မှ ကောင်း မှာ ပါ။ ဒီ သဘော ကို နိုင်ငံတကာ ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် များလက်ခံ ထားကြပါတယ်။
ဥပမာ ပေး ရရင် ကိုယ် က ငါးပိ ကိုကောင်းလှ ချည် ရဲ့ ဆိုပေမဲ့ ဥရော ပတိုက်သားတွေ အတွက် ကတော့ အပုတ် စာ ဖြစ်နေပါတယ်။
အဆိုပါ Forum မှာဘဲ Norma Desmond က ပုံတစ်ပုံ မှာ လှုပ်ရှား သက်ဝင်မှု ရှိနေတဲ့ လို့ ခံစားနိုင်စွမ်း ပေး နိုင်ရင် ဒီပုံမှာ Vitality ရှိတယ် လို့ ဆို ရပါမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိက အနေနဲ့ ပုံ မှာ Multiple and dynamic relationships ရှိနေရင် ပုံ ကို Vitality ပေးလာနိုင်တယ် လို့ ဆိုပါ တယ်။
Still Life ပုံ များကို သာမန် ကြည့် ပါက - ( Which may at first glance seem passive) will have vitality to the extent we forget it's still (or as the French say, dead) တွေဟာ ( Still ဆိုတာ ကို မေ့ သွားလောက်တဲ့ အနေအထား မရှိ သည် အချိန် အထိ ) Passive ပုံတွေ လို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့ -
- “ …… Sunlight can help add vitality. The effects of wind such as blowing hair can add vitality. Fog that seems like breath can imbueaphoto with vitality. A particular twinkle in the eye, that shows signs of life, can add vitality. A particular twinkle in the eye, that shows signs of life, can add vitality.”
စတဲ့ Still Life ပုံအနေ အထား တွေ ဟာလည်း Vitality ပေးနိုင်တာ တွေ ပါဘဲ လို့ ဆိုပါတယ်။
အောက်တွင်ပြထားတဲ့ နမူနာ ပုံများ ကို Vitality Photography ကဏ္ဍ အောက် ကနေ ရှာဖွေ တင်ပြ ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အထက် မှာ Norma Desmond ပြော ခဲ့ သလို တိုက်ရိုက် Dynamic ပုံများသာမက Still Life များပါ Vitality မှာ ပါနေ တာတွေ့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမှန်ဝန်ခံ ရပါက ကျွန်တော် ပုံ များအားလုံး ရဲ့ Vitality သဘော သက်ရောက် မှုမည်မျှ လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ ကို မူ တိကျ သဲကွဲ စွာ မခွဲခြား နိုင်ပါ။
Vitality နမူနာ ပုံ များ။
6 – Repose (5Marks)
ရင်ထဲ နစ် မျော သွားကာ အထပ်ထပ် အခါခါ ကြည့် ရလောက် သော ပုံ မျိုး။
ဤ ခေါင်းစဉ် က ခံစားချက် နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပုံ မျိုးက ကြည့် သူ နစ်မြော သွားစေနိုင်တဲ့ ပုံ ဆိုတာ ပုံသေ ပြော ရန် ခက်ပါမယ်။
အောက် ပါ Repose နမူနာ ပုံများမှာ Photography in Repose နဲ့ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များအောက် မှ သင့်လျှော် မယ် လို့ ထင်တဲ့ ပုံများကို ရွေးကာ တင်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Repose နမူနာ ပုံများ။
7 - Infinity ( 10 Marks )
ပြ တဲ့ အတိုင်း မြင် နေရုံ တင်သာမက တွေးခေါ် စဉ်းစား ဘွယ်ရာ ပုံ မျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။
တစ်နည်း အားဖြင့် ကြည့်သူကို ဘောင် သတ်ခါ ကြည့်စေ တာ မျိုး မဟုတ် ဘဲ ကို ပုံရဲ့ လိုင်းများ ၊ အရောင် များ ၊ အနေအထားများ က တစ်မျှော် တစ်ခေါ် ဆွဲ ခေါ် ကာ အတွေး ကို ကျယ်ပြန့် စွာ ဖြန့် ကျက် စဉ်းစား ကာ မြင် နိုင်ရလောက်သည့် ပုံ မျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။
အောက်ပါ နမူနာ ပုံများကို ကြည့်ပါ က ကြည့်သူရဲ့ စိတ် အလျှင်ကို Frame ပြင်ပ အထိ ဆွဲ ခေါ် သွားခြင်း ၊ ပုံ က ကြည့်သူ ရဲ့ အတွေးကို ဆွဲ ဆန့် ကာ တွေးဆ စေခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် လာစေတဲ့ ပုံ များ လို့ ဆိုရပါမယ်။
Infinity နမူနာ ပုံများ
8 -Title (5Marks )
ပုံ ရဲ့ ခေါင်းစဉ် ဟာ ပုံ ကို စိတ်စား လာစေရန် ၀င် စားလာစေဘို့ လှုံ့ ဆော် ပေးရန် လိုပါတယ်။
မည်ကဲ့ သို့ ပုံ ကို မည် သို့ သော ခေါင်းစဉ် ပေးရမယ် ဆိုတာ ပြော ရန် အလွန် ခက်ပါတယ်။ သက္ခထုပ္ပတ္တိ ဥာဏ် ရှိသလို မိမိ ဥာဏ် ကွန့် မြူးကာ ပေးကြ ရမှာ ဘဲ။
အတိအကျ ပြော ရ ခက် လို့ ဓါတ်ပုံ ခေါင်းစဉ် ပေးတာ လည်း အရေးကြီးကြောင်း ရေးထားတဲ့ 121 Click ဆောင်းပါးတစ်ခု ထဲ က ပုံတွေ ကို ခေါင်းစဉ် ပေးထားတာ ကို နမူ နာ ပြ ပါမယ်။
အထက် တွင် ပြောခဲ့ သလို ဓါတ်ပုံ တွင်နည်းပညာ ပိုင်း ( Technical ) နဲ့ အနုပညာ ပိုင်း ( Artistic ) ဆိုတဲ့ အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ရှိပါတယ် လို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။
ငယ်စဉ် က အစဉ် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ မြ၀တီ ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ် မှတ်ချက် တွေ မှာ “ ကြည်လင် ပြတ်သား မှုရှိတယ် ၊ ဆေးသား ကောင်းမွန် တယ် ၊ အရောင် ပြေပြစ်တယ် “ စသည်ဖြင့် Technical ပိုင်းဆိုင်ရာ မှတ် ချက် လိုမျိုး ကို တော့ တိတိ ကျကျ ပြော လို့ ရပါတယ်။ ကြည့်သူ သို့ မဟုတ် ဆုံးဖြတ် သူ တွေ ဘယ် လို မှ ၀ိဝါဒ ကွဲ နိုင်စရာ မရှိပါ။
ဒါပေမဲ့အနုပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်တဲ့ အထားအသိုလ်၊ ကြည့်တဲ့ လူ ရင်ထဲ စိမ့် ၀င်သွား အောင် ဆွဲခေါ် ကာ စကားပြော နိုင်တဲ့ ( Story telling) ပုံစံ စတာတွေ ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ခြင်းစီ ရဲ့ ခံစား မှုနဲ့ ဆိုင် မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် ကျွန်တော့် ပုံ တစ်ပုံကို ဓါတ်ပုံ ဆိုင်ရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုပေါ် တင်လိုက်ရာ မှာ Story telling ရှိတယ် လို့ အဲဒီအဖွဲ့ ရဲ့ လူ အချို့ ကမှတ်ချက် ပေး ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကျွန်တော့် ပုံ မှာ ဘာ Story မှ မမြင်ပါ။ ကိုယ့် ညံ့ တာလည်း ဖြစ် ပါမယ်။
ဆိုလို တာက အနုပညာ ခံ စားမှု ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့ နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အကြား အများ ကြီး ကွာနေ နိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ ဆိုင်ရာ Rules ( ဥပဒေသ) တွေ ဟာ (Guiding ) ဆိုတဲ့ အညွှန်းသာ ဖြစ်တယ်။ အသေယူရမဲ့ ( Biding Rules ) တွေမဟုတ် ဘူးလို့ ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် များက ဆိုပါတယ်။
ဥပမာ အား ဖြင့် Rule of Thirds တို့ Golden Ratio တို့ လို Composition Rule တွေ ဟာ “ ကိုယ် ပြ လိုတဲ့ ပုံ ကိုအလယ် တည့်တည့် မှာ နေရာ ချထား တာ ထက် အဲဒီ Rule တွေ မှာပြ ထားတဲ့ ဆုံမှတ်နေရာ တွေ မှာ Main Subject ကို နေရာ ချထားရင် လူ ရဲ့ စိတ်သဘော သဘာဝအရ မျက်စေ့ ထဲ ပို ရောက်တယ် ၊ ပို ပြီး အာရုံသက်ရောက်မှု ရှိတယ် လို့သုတေသန မဟုတ် စေကာမူ လူအများ ရဲ့ ခံစားမှု ကို လေ့လာကာ ရေးခဲ့ တဲ့ Rule တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Rule တွေ အတိုင်း မဟုတ်တဲ့ ပုံတွေ လည်း တစ်ပုံ ကြီး တွေ့ ဘူးပါတယ်။
Rule တွေ ကို သွေ ဖည် ရန် ပြော နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေ သ တွေ ကို လှေနံ ဓါးထ စ် အသေ ယူလို့ မရ တဲ့ အကျပ် အတည်း အခြေ အနေ တွေ မှာ ဒီ Rule တွ ရဲ့ အချုပ် အနှောင်ထဲ မှာ ပိတ် မိ ခံနေရ တဲ့ အဖြစ်မျိုး မရောက် ဘို့ အတွက် ပြောရ ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်လို့ ခေတ်ကာလ တွေ ကြာလာ လို့ ပုံ ကို အလယ် တည့်တည့် မှာ ထားရင် ပို လာရုံ စိုက် လာမဲ့ လူ တွေ ရဲ့ အကြိုက် ပြောင်း လာရင် ( Rule of Center ) ပေါ် လာဦးမှာ ပါဘဲ။
ဒီလိုပါဘဲ Portrait ဆရာ များအနေနဲ့ လူ ပုံ တစ်ပုံ ရဲ့ မျက်လုံး အနေအထား ဘယ်လို ရှိရမယ် ၊ ပါးစပ် က ဘယ်လို အနေ အထား ၊ မေးစေ့ က မည်သို့ မည် ပုံ Angle ၊ နှာခေါင်း အနေ အထား မမှန်ရင် Subject ရဲ့ တစ်ဘက်က ပါး ကို ကွယ်သွား နိုင်တဲ့ အမှား များ ၊ များစွာ သိမ်မွေ့ လှတဲ့ Model ရဲ့ ကိုယ်ဟန် အနေ အထားရဲ့ အမှန် အမှား ၊ စသည် ဖြင့် သာမန် ကြည့်သူ များ သတိ မထားမိတဲ့ အချက် တွေ အပြင် လင်း ရောင် ပေးမှု မည်သို့ မည်ပုံ ပေးရမယ် စတဲ့ သတိထားရမဲ့ အချက် တွေ များစွာ ရှိကြောင်း မိတ်ဆွေကြီး Portrait ဆရာ ကိုမြင့်အောင် ( Ko Myint Aung Nonstop ) က ကျွန်တော့် ကို ပြောဘူးပါတယ်။
တစ်ခါက Portrait Lighting ကို လက်တွေ့ လေ့လာ လို သဖြင့် ကိုမြင့်အောင် ရဲ့ Valentine Studio ကို လိုက် လေ့ လာကြည့်ရာ Portrait Lighting ဟာ ကျွန်တော် ထင်တာထက် များစွာ ခက်ခဲ နက်နဲ တာကို တွေ့ မြင်လာရပါတယ်။
မိမိ ရိုက်မဲ့ ပုံ ကို လိုသလို ရုပ်လုံး ကြွ လာစေဘို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ Lighting တွေဟာ ပညာ ရော ပစ္စည်း ပါ မနည်း လှပါ။ ဒီလို Portrait ဘာသာ ရပ်မှာ Effective Lighting ကို အကဲ ဖြတ် ရင် ကိုမြင့်အောင် တို့လို Portrait ဆရာတွေ ဘဲ အထိရောက်ဆုံး အကဲ ဖြတ် နိုင် မယ် ထင်ပါတယ်။
အလားတူပင် Bird in Flight ရိုက် တဲ့ အခါ မှာ လည်း ငှက် ရဲ့ Flight Path, Shooting angle and Bird's Position, Wing Position, Freezing style of flipping wing tips, Clarity and Brightness Spot of eyes, Difficulties of the shooting situations စသည် စသည် ဖြင့် Bird in Flight ပုံကောင်း တစ်ပုံ မှာ ရှိရမဲ့ အချက် တွေ ကို သတ် မှတ် ထားပါတယ်။
ပု၈္ဂိုလ် တစ်ဦး ၊ ဆရာ တစ်ဦးဟာ သူ သန်ရာ သန်ရာ ကို အသေး စိတ် သိနိုင် ပေမဲ့ ဒီလို ကျယ်ပြန့် လှတဲ့ အခြားသော ဘာသာရပ်တွေ တွေကိုတော့ ယေဘူယျ သဘော လောက်သာ သိနိုင် ကောင်းသိနိုင်ပါမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပါယ်က ပုဂ္ဂိုလ် တွေ လောက် ထဲထဲ ၀င်ဝင် သိနိုင်ဘွယ်ရာ ရှိနိုင်မယ် မထင်ပါ။
တစ်ခါ က Bird photographer မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ဟာ Bird Photographer တွေ အမြင်အရ အလွန် ရခဲ ပြီး ဓါတ်ပုံ သဘော အရ လည်း အပြစ် အတော်ကင်း တဲ့ ပုံ တစ်ပုံ ကို သာမန် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ကို ပို့ လိုက်ရာ ဘာဆု မှ မရ လိုက်ပါ။
သို့ သော် Nature Category ရဲ့ ပုံကောင်း တစ်ပုံ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိလို့ ဓါတ်ပုံ ဆိုင်ရာ မှာ သြဇာ ကြီး တဲ့ ပြိုင်ပွဲ ကြီး တစ်ခု ကို ပို့ လိုက် ရာ ဆု ရ ခဲ့ပါတယ်။
အနပညာ ကို ခံစားတာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ကွဲပြား မှု ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာကို နမူနာ ပြတာပါ။ မည်သူ မှားတယ် မည်သူ မှန် လို့ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
ပုံ တစ်ပုံ ကို အကဲဖြတ် တာနဲ့ ပတ်သက် လို့ အကျယ် ချဲ့ ပြော ရရင် အောက်ပါ ပုံ ကဲ့ သို့ ပုံ တစ်ပုံ ရဲ့ Negative space ကို Subject ရဲ့ ရှေ့ မှာ အ မြင် လွတ်လပ် အောင် ဖွင့် ပေး တဲ့ လှပ တဲ့ Breathing Space လို့ မြင်သူ ရှိ သလို ၊ အလဟသ နေရာ ( Waste space ) လို့ ယူ ဆတာ တဲ့ သူ မျိုး လည်း ရှိပါတယ်။
ပုံ တစ်ပုံ ထည်းမှာ ပင် အဓိက Subjective ကို အရံ ပုံ များက ပံ့ ပိုးပေး ထား တာ ကောင်း တဲ့ Compliment to the Subject ဆိုပြီး ဒီအချက် ကို အားသာ ချက် အဖြစ် အကဲဖြတ် တာမျိုး လည်း တွေ့ ဘူးပါတယ်။
ပုံ တစ် ပုံ အတွင်း ဘယ်လို သော Elements တွေ ထည့် ပြီး ဖွဲ့ စည်း ထားသလဲ ၊ လိုနေတာ ရှိနေ သလား ၊ Elements တွေ ပိုနေတာ လား ၊ ပုံ ရဲ့ Visual appeal ကို ပံ့ပိုး ပေးတဲ့ Frame အတွင်း Elements အချိုး ညီ မှု ( Equal visual weight ) ရှိမရှိ ဆိုတဲ့ Balance စသည်...စသည် ဖြင့် ပုံ တစ်ပုံ နဲ့ ပတ်သက် လို့ အကဲ ဖြတ် နိုင်တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ပုံတစ်ပုံ ကို သာမန် တွေ့ဘူးနေကျ ဥပဒေသ များစွာ အပြင် အောက်ပါ ပုံများကဲ့ သို့ Triangle Rule ကို အခြေ ခံ တဲ့ Diagonals Rule နဲ့ နေရာ ချထား ကာ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ Composition ကို အားသန် သူများအနေနဲ့ ဒီ Rule ဘက်ကို လု ကာ အကဲ ဖြတ် နိုင် မယ် ထင်ပါတယ်။
အကဲဖြတ် နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ဆက်ပြော ရရင် ကုန်နိုင်မယ် မထင်ပါ။
ဒီ လို မူ အမျိုး မျိုး အကဲဖြတ် ကောက်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိ နေတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်လှမ်း မှီရာ ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ် ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး တစ် ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ Jennifer Hibbs ရဲ့ Criteria for JudgingaPhoto ဆောင်းပါး ပါအချက် အချို့ ကို ကောက်နှုတ် ဖေါ် ပြ ပါမယ် -
Jennifer Hibbs က ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ် ခြင်း ဆိုင်ရာမူ (Criteria) များ ဟာ အောက် ပါ အချက် တွေ ဖြစ်ကြော င်း ယခ င် ကရေးခဲ့ ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
· Adherence/Appropriateness to Theme
· Uniqueness of Concept
· Artistic Approach
· Innovative Means of Delivering Message
· Entertainment Quality
· Overall Artistic Impression
· Clarity and Quality of Submission
· Color, Lighting, Exposure and Focus
ယခုနောက် ပိုင်း ကာလတွေ မှာ တော့ ဓါတ်ပုံ ဟာ စီးပွားရေး နယ် ပါယ် အတွင်း ကျယ်ပြန့်  စွာရောက်လာ လို့ ဓါတ်ပုံ အကဲ ဖြတ် ခြင်းဆိုင်ရာ Criteria ဟာ အောက် ပါအတိုင်း ပြော င်းလဲ လာ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
· Inspirational Power
· Expression of Theme
· Usage of Brand to Reinforce Theme
· Current/Potential Social Impact
· Inspiration to Others
· Wow! Factor
သို့သော် Jennifer Hibbs ဖေါ်ပြ ထားတဲ့ ဒိုင် များစဉ်း လေ့ ရှိတဲ့ အချက် အချို့ ကို အကျဉ်း ချုပ် ကာ ဖေါ်ပြ ပါမယ်။
· ပုံ တစ်ပုံဟာ ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ Official Rule များဖြစ်တဲ့ Entry Limitations, Judging Criteria, required Releases and more, specifically the Entry Content, Creative and Technical Requirements တို့နဲ့ ကိုက်ညီ သလား၊
o Impact – ပုံဟာ ကြည့် သူ မြင်လိုက် ရုံ မျှ နဲ့ ဖမ်းစား နိုင်သလား၊
o Creativity – ရိုက်ကူးသူ အနေနဲ့ သူ့ စိတ် ကူး နဲ့ ပေးလို တဲ့ Message
o ကို ပေးနိုင်ရဲ့ လား၊
o Style – ရိုက်ကူးတဲ့ သူ အနေနဲ့ ကြည့်သူ ကို လွမ်းမိုး နိုင် ဘို့ အတွက် ပုံ ဖြင့် သူ့ ရဲ့ personal originality and technique ဖြင့် ပုံဖေါ် နိုင်ရဲ့ လား၊
o Subject Matter – ပုံ က အကြောင်း အရာ နဲ့ ဘောင်ဝင်ရဲ့လား၊
o Story Telling – ကြည့်သူ အနေနဲ့ပြ ထားတဲ့ ပုံ အတွင်း ရောက် သွားသကဲ့သို့ နစ်မြော သွားစေ နိုင်သလား
စတဲ့ အနုပညာ ဆိုင်ရာ Artistic impression တို့ အပြင် အောက်ပါ Technical matter တွေ ကိုပါ ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
o Technique – ပုံ ကို ဖန်တည်း တဲ့ approach ။ Printing, lighting, posing, capture, presentation media, and more are part of the technique applied to an image.
o Composition – Visual elements တွေ အားလုံး အချိုးကျ မျှတ အောင် ဘယ်လို ဖေါ် ဆောင် ထားသလဲ။ ပုံ ရဲ့ အဓိက ပြ လိုတဲ့ အချက် ရောက် အောင် ကြည့်သူ အား ဆွဲ ခေါ် သွားနိုင်သလား။
o Presentation – Finishing touches လုပ် ဘို့ ကျန်နေသေးလား။
o Color Balance – Color ၊ Tone Work တွေဟာ ပုံ ကို အထောက် အပံ့ ဖြစ်စေရဲ့လား ၊ ( Color Balance is not always harmonious and can be used to evoke diverse feelings for effect.)
o Center of Interest – အဓိက အာရုံ ကျရောက် စေမဲ့ ( Center of Interest – CoI ) ပါ ရဲ့ လား၊ တစ်ခု ထက် ပို လား ၊ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ခု မှ မပါ ဘူး လား ၊
o Lighting — သဘာဝ အလင်း ဖြစ်စေ၊ ဆင်ထားတဲ့ အလင်း ဖြစ်စေ ဒီ Lighting တွေ ကို ထိထိ ရောက်ရောက် သုံး နိုင်ရဲ့လား၊
Wow! Factor – Wow ကနဲ့ ပါးစပ် ဟ သွား ရ လောက်တဲ့ အနေ အထားမျိုး ရှိရဲ့လား။
ဒါ တွေ ကို ကြည့် လေ့ ရှိတယ် ဆိုတာ အချုပ် ကောက်နှုတ် ဖေါ်ပြ လိုပါတယ်။
ဒိနေရာ မှာဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ မှာ အရေးပါတဲ့ Story Telling အကြောင်း ပြော လိုပါတယ်။
မြန်မာ လို တိုက်ရိုက်ပြန်ရင် “ စကားပြောနေတဲ ပုံ “ တစ်နည်း အားဖြင့် ပုံ ကကြည့် သူကို သူ့ Frame အတွင်း ဆွဲသွင်းကာ သူ ပြ လိုတာကို ရင်ထဲ စွဲ သွားအောင် ပြ နိုင်တဲ့ ပုံ လို့ ဆိုရပါမယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဓါတ်ပုံ ဆရာ Elliot Lee ပြောတာ လေးကို ဖေါ်ပြ လိုပါတယ်-
“ Every picture hasastory to tell,astory in which I try to immerse my audience – taking people intoascene and allowing them to feel as if they are right there in that very moment. “ လို့ ဆိုတာကို သဘောကျ ပါတယ်။
ပုံတိုင်းမှာ ပြော စရာ Story ရှိတယ် ၊ သူ့ အနေနဲ့ ကတော့ ကြည့်သူကို ပုံ အတွင်းဆွဲ ခေါ်သွားကာ ထိုခန အတွင်း မှာ အဲဒီနေရာ ရောက် နေသကဲ့ သို့ ခံစား ရအောင် လုပ်လိုက်တာပါဘဲ လို့ ဆိုတာပါ။
Story telling ပုံတွေ များစွာ ရှိပါမယ်။ သို့ ရာတွင် အောက်ပါ ပုံ တစ်ပုံ ကို နမူနာ ပြ လိုပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် Vinny O’Hare ရဲ့ Story telling ပုံ များအကြောင်း ထဲ က ကောက်နှုတ် ထား တာပါ။
Vinny O’Hare က အထက်ပါ ပုံ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြ ထား ပါတယ် -
“ ကျွန်တော် World Trade Center မှာ ပြု လုပ် တဲ့ မီး ရောင်စုံ ထိုးပွဲ ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက် ဘို့ မသွား မှီ Battery Park သို့ ခေတ္တ မျှ ၀င်လိုက် ပါတယ်။ အချိန် က နေ၀င် ဖြိုးဖြ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအချိန် မှာ မျိုးငယ်တစ်ဦးဟာ နေ၀င်စပြုနေသည့် Ellis Island ကို ဓါတ်ပုံရိုက် နေ တာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ နေ၀င်လု ဆဲဆဲ အချိန် မှာ ကျွန်တော် သူ့ ကို ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ မိန်းခလေး ဟာ နေ၀င် နေတာ ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်နေတယ် ဆို သော် လည်း သူဟာ နေကို မကြည့် ဘဲ တစ်ဘက် ကမ်းက Ellis Island ကိုသာ တွေဝေ ငေးမော ကာ ကြည့်နေပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်စေကာမူ ဓါတ်ပုံ ထက် သူ ဘာတွေများ စဉ်းစား နေပါ လိမ့် ၊ Ellis Island ဟာ သူ့ ဘိုးဘွား မိဘ ဆွေမျိုး တွေများနေခဲ့ တဲ့ နေရာ ဖြစ်လို့ အလွမ်း နဲ့ ကြည့် နေတာ လေလား ၊ သို့ တည်းမဟုတ် မည် သို့သော အဆွေး ဓါတ်ခံ ရှိနေ သလဲ စသည်ဖြင့် အတွေး များ က စိုးမိုး လျှက်ရှိပါ တယ်။ ပုံ အတွင်းရှိ Subject ရဲ့ အသွင် အပြင် က ကြည့် သူ ဖြစ်သော ကျွန်တော့် ကို ခံစား မှု အတွေ များစွာ ပေးနေပါတယ် ။ “
လို့ အထက်ပါ ပုံ ရဲ့ Story ကို ရှင်းပြ ထားပါတယ်။
ဒီ ပုံ ကိုဘဲ သူခံစားမိတဲ့ ခံစားမှု ရာနှုန်းပြည့် အခြား သူတွေ က ခံစား နိုင်ကြသလား ဆိုတာကိုတော့ ယတိပြတ် ပြော ရန် ခက်ပါမယ်။ စိတ္တဇ ပန်းချီ ကို ခံစား အဓိပ္ပါယ် ဖွင့် သလို လည်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။
အထက် မှာ ဆိုကဲ့သလို ပုံ တစ်ပုံ ကို အကဲဖြတ်ရာ မှာ သံတူ ကြောင်းကွဲ မြောက်များစွာသော Criteria တွေ၊ အမြင်တွေ ၊ ကောက်ချက် တွေ၊ အကဲ ဖြတ် ချက် တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် အခု တင်ပြ ခဲ့တဲ့ S D Johar ရဲ့ အမှတ်ပေး ဇယား ပါ အချက် တွေ ကတော့ အခြေ ခံ အချက် တွေ လို့ ဆိုရပါမယ်။
ကိုယ်သဘော ကျ ဖန် တည်း လို ရင် တော့ ကိုယ့်သဘော နဲ့ ကိုယ် Photo my Way အတိုင်း ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
ပြိုင် ပွဲ ၀င်သူတွေ အနေနဲ့ ဆုရလိုပါ က ကိုယ်ကြိုက်သလို ထင်သလို လုပ်လို့ မရဘဲ ပြိုင်ပွဲ က အကဲ ဖြတ် ရန် သတ်မှတ် ထားတဲ့ Rules တွေ အတိုင်း ဘောင် ၀င် အောင် ဆောင်ရွက်ကြ ရမှာဖြစ် ပါဘဲ။
ဒိုင် တွေ က လည်း သူတို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ Rules တွေ နဲ့ ဘဲ စံ ထိုး ဆုံး ဖြ တ် ကြမှာ ပါဘဲ။
အခု မှတ်စုကတော့ မန္တလေး ကိုစိုးလှိုင် ရဲ့ Post ကို အခြေ ခံကာ အကဲဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အရူးလွယ် အိပ် လို ထွေ ရာ သောင်းပြောင်း မှတ်စု လေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Soe Hlaing at 00:19
soe lwin7January 2019 at 05:23
Very good post Sayer Soe.
(101) – Judging thePicture ...